Tsinian’ny Kiorda Ho Ambadiky Ny Fanapoahana Fiara Tao Erbil ireo Arabo Mpialokaloka · Global Voices teny Malagasy
Tsinian'ny Kiorda Ho Ambadiky Ny Fanapoahana Fiara Tao Erbil ireo Arabo Mpialokaloka
Voadika ny 23 Novambra 2014 7:25 GMT
“#VAOVAO FARANY— Nisy fanapoahana fiara teo ivelan'ny biraon'ny governora ao #Erbil — Manamafy izany ny manampahefana Tahir Abdullah,” sioka avy amin'ny @RudawEnglish
Olona dimy farafahakeliny no namoy ny ainy ary 29 no naratra tamina fanafihana fanapoahana fiara tamin'ny Alarobia tao Erbil, renivohitry ny faritra mizaka tenan'i Kiordistana Atsimo ao Avaratr'i Irak, araka ny fanamafisan'ny minisiteran'ny Fahasalamana tamin'ny valan-dresaka hoan'ny mpanoratra gazety. Niseho teo ivelan'ny lapan'ny governorà ny fanafihana, izay savaina aloha ny fiara vao mahazo miditra.
Mangina i Kurdistan Atsimo raha oharina amin'i Bagdad mpifanolo-bodirindrina aminy, tanàna iharan'ny fanafihana fanapoahana fiara isan'andro, indrindra ao amin'ireo faritra misy Shiita maro an'isa. Niteraka adihevitra mafana teo amin'ireo Kiorda mpiserasera media sosialy amin'ny fitobak'ireo mpialokaloka ao amin'ny faritra izany trangam-panafihana izany.
Tombanana ho 1,4 tapitrisa akehitriny ireo mpitsoa-ponenana sy olona nafindra toerana ao amin'ny faritra. Toa nankatò ny fandraisana ireo mpitsoa-ponenana ny faritra ary nanome fialokalofana milamina hoan'ireo vitsy an'isa ara-pivavahana toy ny Arabo kristiana.
taorian'ny fanafihana nanao vivery ny ainy tao Erbil, olona maro tao an-toerana no nametra-panontaniana momba ny politikan'ny #KRG mikasika ny fandraisana ireo olona Arabo nafindra toerana – miakatra ny fifanenjanana sy ny ahiahy
Na dia eo aza ny fihetsika tia mandray vahiny asehon'i Kiordistan amin'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny faritra, maro ireo olona nametra-panontaniana momba ny politikan'ny Governemanta Rezionalin'i Kiordistan (KRG) amin'ireo mpialokaloka. Niantso ny hanamafisana ny fiarovana amin'ny fanarahamaso ny fitobak'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny faritra ny Kiorda ao an-toerana, ary nilaza ihany koa izy ireo fa azo lazaina ho mpitsoa-ponenana ireo miaramila malaza maherisetra avy ao amin'ny ISIS nitsangana vao haingana – nisintaka tamin'ny vondrona Al-Qaïda ary tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ireo miaramila Irakiana, miaramila Syriana, mpiasa mpanao asa soa, mpanoratra gazety sy ny fakàna an-keriny, ny fanolanana sy ny fanambadiana noterena mihatra amin'ny vehivavy.
Taorian'ny fipoahana, nitodika tamin'ireo mpitsoa-ponena sy olona nafindra ao anatiny amin'ny fandrahonan'ny ISIS rezionaly sy ny sorona ataon'ireo mpitandro ny filaminana Kiorda ireo mpanao politika Kiorda, mpitarika sy mpikatroka.
Vao napetraky ny Filohan'ny Kiordistana ny Ivon-toera-pikarohana ao Afovoany Atsinanana Dlawer Ala'Aldeen handray anjara amin'ny adihevitra antserasera amin'ny tokony ametrahana mpitarika Kiorda miara-dalana amin'ny mpitarika Arabo handray andraikitra manoloana ny tsy fahombiazana ankehitriny eo amin'ny firenena ho fanamafisana ny fiarovana sy hampihena ny fiitatry ny fihanaky ny mpiadin'ny ISIS.
Mamono tsy misy antra ireo tsy manan-tsiny ny mpampihorohoro ary mamono tena tsy am-pisalasalana. Tsy misy olona afa-bela amin'izany. Mba handresena azy ireo, dia tsy maintsy ny fanohan'ny vahoaka ireo mpitarika ary miray hina
Naneho hevitra manoloana ny fanafihana tao Erbil ihany koa ny Solontena Ambonin'ny Governemanta Rezionaly Kiordistana ao Angletera, Bayam Sami Rahman, izay manana ny rainy namoy ny ainy tamin'ny fanafihana fanapoahana fiara tamin'ny taona 2004 , nasongadiny tamin'izany ny fitomboan'ny fandraisam-bahiny ao amin'ny faritra sy ny fiarahamonina maro finoana.
Hitohy honina anaty filaminana, hitsangana hanohitra ny fampihoroborona i Erbil, renivohitr'i Kurdistan, tanàna milamina iriariavan'ny Kristianina sy Miozolomana
Tamin'ny fanehoan-kevitra manoloana ny fitantarana nataon'ny sampam-baovao malaza iray ao an-toerana momba ny voka-dratsin'ny fanafihana, dia maro ireo niantso ny amin'ny hamindrana ireo Arabo ao amin'ny faritra, raha namaly izany feo nasionalista tafahoatra izany tamin'ny fitsikerana kosa ny hafa, miampanga azy ireo ho tsy mandefitra, manavakavaka sy mpanavakavaka.
Naneho hevitra tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Sampam-baovao Rudaw i Niroj Dosky izay nilaza hoe: “Tsy mila Arabo ao Kiordistana.” “Tahaka izao no mitranga rehefa mamela ireo Arabo hiditra ao amin'ny firenentsika ianareo”, hoy kosa i Kaso Shottas nanoratra.
Avy amin'i Wazi Aziz ny valinteny tsy mitanila indrindra, hoy izy, «Tsy valinteny velively ny tsy firaharahiana. Kiorda aho, ary tahaka ireo hafa an'arivony, voatery nitsoaka ny tranoko aho noho ny fitondran'i Saddam, saingy ny zavatra iray azoko […] dia aza mba mitsara olona noho ny loko na firenena niaviany […] Hoan'ireo olona milaza fa ny handroahana ny Arabo rehetra, tsy fantatrao ve fa amin'ny filazana izany, ratsy kokoa noho izy ireo ianareo? “
Mahatonga ireo vahiny, olona nafindra toerana sy ireo mpitsoa-ponenana ho ifantohan'ny resaka ny olana amin'ireo fanehoan-kevitra sy valinteny bontana amin'ny fanafihana mamono tena amin'ny baomba. Mitranga indrindra izany amin'ny fankahalana Arabo mahazo vahana ao amin'ny faritra, izay raisina ho tsy manao na inona na inona mitovy amin'ireo mpitarikany manoloana ireo mpitolon'ny ISIS.
Etsy andaniny, mitatao tanteraka amin'ny faritra Kiordistana ny fandrahonan'ny ISIS, ary tsy maintsy hovahana amin'ny alalan'ny fepetra antonony. Tsy misy na inona na inona enti-manamarina ny fanavakavahana sy ny fanakatonana sisintany ny mpitsoa-ponenana, saingy zava-dehibe ny mametraka fepetra fanaraha-maso tsy hahatafiditra ao amin'ny faritra ireo mpiadin'ny ISIS ho toy ny mpitsoa-ponenana.
Baomba nahafatesana olona tao Erbil androany izay hampisy fiantraikany amin'ny fijerin'ny mponina ao Kiordistana izay tsy Kiorda.
Nandritra izany fotoana izany, namoaka fanambarana mandrisika ny vahoaka “ho mailo indrindra sy handray andraikitra amin'ny filaminana “ny filankevitry ny minisitry ny Governemanta Rezionaly Kiordistana”.